युवतीहरु संग भोट माग्दै बालेन हेर्नुस, घर घरमा पुग्दा यस्तो नसोचेको क्रेज देखियो – Sandes Post
युवतीहरु संग भोट माग्दै बालेन हेर्नुस, घर घरमा पुग्दा यस्तो नसोचेको क्रेज देखियो
May 5, 2022 254
काठमाडौँ | आज काठमाडौँ वार्ड नम्बर ६ तिर सिफल, कालोपुल, हाडीगाउँ मा बालेन शाह को घरदैलो कार्यक्रम सुरु भएको छ | गएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदको विबेकशिल साझाबाट टिकट पाएर चर्चा कमाएकी पात्र हुन् रञ्जु दर्शना । सानै उमेरमा कामठमाडौँको मेयर बन्ने सपना देखेपनि रञ्जु सामाजिक संजालमा मात्रै चचिृत बनिन् ।
अब छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन चाहिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘आशा छ, नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्नेहरुले नयाँ पुस्तालाई नै भोट दिनुहुन्छ ।’ नेपालको विकास मोडलमा समस्या देखेको उनी बताउँछन् ।
‘मैले इन्जिनियरिङ पढें । बुझ्दा हामीले गरिरहेको विकास गलत रहेछ । ०७२ को भूकम्पमा सय वर्ष पुरानो माटाका घर नभत्किने, आधुनिक घर भत्किने यो किन भयो शाह थप्छन्, ‘एउटा मात्रै मापदण्ड भनेर वा फलाम बढी हाल्दैमा विकास दिगो हुन्छ भन्ने मानसिकता गलत छ ।’ हेर्नुस –
यो पनि : प्युठान घर भएकी उषा सुनुवाको कहानी सुन्दा कस्को पो मन थामिएला र ? जन्मिदै दुई वटा थिएनन । आमा पनि उनी जन्मेको दुई वर्ष पछि सधैँ*का लागि छो**डेर जानुभयो । आमाले छो*डेर गए पछि उषा सुनुवाले बुवाको माया पनि राम्रोसगँ पाउन सकिनन जिन्दगीभर । त्यसैले पनि होला उनलाइ अहिले जिन्दगीसगँ हारिसकेको जस्तो अनुभव हुने गर्दछ । जसोतसो पाँच कक्षासम्म अध्ययन गरेकी छिन उषा सुनुवारले ।
Prevगायक स्वप्न सुमनले गरे बिहे
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, बैशाख २३ गते शुक्रबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
किन आए सुटुक्क २२ अमेरिकी सेना ह-तियारसहित काठमाडौंमा ?
भक्तपुरको चार दोबाटो चोकमा घट्यो अत्यन्तै दुखद घटना